Madaxweyne Kuxigeen Camey: “War Daaroodba isma soo gaaraan Muuse wuxuu naga dilo daaye waxar nagama dilin.” – Radio Daljir
Juunyo 1, 2018 2:47 b 0
Wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo Madaxweyne Kuxigeenka Dowladda Puntland, Inj. Cabdixakiin Xaaji Cabdulaahi Cumar Camey, ayaa gaaray magaaladda Buuhoodle, xarunta Gobalka Cayn. Wafdiga Camey oo si heer sare ah loogu soodhaweyaay Buuhoodle ayaa muujisay midnaanta reer Buuhoodle iyo gobolka Cayn oo dhan iyo sida ay u taagersanyihiin mowqifka dowladda Puntland ee ku aaddan xoreynta gobolka Sool.
Madasha kulanka oo ay khudbad qiiro leh ka jeediyeen Isimada Gobolka, cuqaasha, indheergaradka iyo saraakiisha ciidamada, waxaa ka hadley Madaxweyne Camey.
Camey oo ka jawaabaya aflagaadada Madaxweyne Muuse Biixi uu kula kacay qabaa’ilka Daaroodka iyo hadalkii Muuse ee “orda Daaroodoow waxaan idin ku dhigney awoowayaashin ka soo wareysta” ayuu Camey ka yiri, “war Daaroodba isma soo gaaraan asaga. Wuxuu naga dilo daaye waxar nagama dilin. War annagu kuwaan is gaarno ee aan is dilno waa is dilnaa waana ka heshiinaa, waana nimankaas Garxajis iyo Habarjeclo.”